Taa bụ sọndee, gọọmenti Amerịka ekwuona na onye agha ahụ ndị soja Afghanistan gburu na nso a bụ onye Amerịka.
Ọnụ ọgụ ndị agha mba Amerịka e gburu n’agha na mba Afganistan eruona 2,000. Nke a na-echetere ụwa na agha na-eri isi mmadụ. Nke a mere ya afọ 11 kemgbe a malitere ịlụ agha ahụ na Afganistan. Gọọmenti Barack Obama ekwuona na ndị Amerịka ga-ewete agha ahụ n’isi njedebe n’afọ 2014. Mana ọtụtụ ndị Amerịka akwadozighị yabụ agha a na-alụ.
Ọnụ ọgụ ndị agha riri na-arizi elu kemgbe ọnwa ole n’ole ndị soja na ndị uwe ojii kwesiri ina-amụta ihe na-aka ndị agha mba Amerịka maliteziri gbuwe ndị Amerịka na-akụziri ha ihe.